FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ESKIMO AMERIKANA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika eskimo amerikana
Chloe ilay Eskimo amerikana efa lehibe
Lisitry ny alika amerikana eskimo mifangaro
Amerikanina Eskimo Spitz
Alika kely Eskimo
Alika Eskimo mahazatra
Alika Eskimo kilalao
Ny American Eskimo dia alika tsara tarehy kely sy salantsalany somary Avaratra izay mitovy amin'ny Samoyed kely. Misy karazany telo: kilalao, kely ary fenitra. Midika izany fa misy Eskie ho an'ny tombontsoa rehetra sy ny haben'ny trano. Ny Eskimo amerikana dia manana lohany miendrika wedge miaraka amin'ny volony sy karandohany mitovy halava aminy. Izy dia manana sofina mijoro, miendrika telozoro, ary rambony be volo no mihorona eo an-damosina. Entina tsara ny tendany ary tsara sy haavon'ny topline. Ny tongotra sy tongotra tsara dia mamela ny Eskie hivezivezy amin'ny hetsika mahery fo. Ny palitao be fotsifotsy dia fotsy foana, na fotsy misy biskoitra na marika fanosotra. Mavokely na volondavenona ny hodiny. Ny mainty no loko ankafizin'ny hodi-maso, gums, orona ary pad. Mavesatra manodidina ny tendany ny palitao, miteraka ruff na mana, indrindra amin'ny lahy. Somary lava kokoa noho ny hahavony ny karazany. Ny palitaon'ny eskimo amerikana dia tsy tokony hikorontana na hanofahofa ny akanjo ambany dia tokony ho matevina ary hambolena miaraka amin'ny palitao ivelany mahery kokoa maniry eo aminy. Tsy misy loko hafa ankoatr'ireo voalaza etsy ambony ireo. Ny maso dia tsy tokony ho manga ary tsy misy Eskie aseho raha ambany 23 santimetatra (23 cm) na 48 santimetatra (48 cm) ny halavany.
Alika be fitiavana sy be fitiavana ny Eskimo Amerikanina. Hardy sy milalao, izy ireo dia tsara amin'ny ankizy. Mahafinaritra sy mailo. Noho ny fahaizan'ny alika avo sy ny fahavononany hampifaly dia mora ny mampiofana ary matetika no isan'ny scorer ambony amin'ny fitsapana fankatoavana. Tian'ireo Eskimo amerikana ny miasa. Matetika izy ireo dia mitandrina amin'ny olon-tsy fantatra, fa raha vao tafiditra dia lasa mpinamana akaiky. Eskimo dia mila tafiditra ao amin'ny fianakaviana miaraka a mpitarika fonosana mafy orina, tsy miovaova ary matoky tena . Raha avelanao hino ny alika dia izy no mpitondra ny tranonao , ambaratonga maro samihafa olan'ny fitondran-tena hitsangana, Anisan'izany fa tsy voafetra ho, fanahiana fisarahana , fanjanahana mibontsina, herisetra alika, finiavana ary fiambenana . Tsy ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana , izy ireo dia mety ho lasa hyperactive sy strung avo, mihodina amin'ny faribolana. Ny alika kely dia manana fironana ambony kokoa ho lasa mpitarika entana amin'ny olombelona, ​​satria bitika sy mahafatifaty izy ireo, ary matetika dia tsy tsikaritr'olombelona ny zava-nitranga. vakio ny Syndrome kely alika raha te hahalala bebe kokoa.
Kilalao: 9 - 12 santimetatra (23 - 30 cm) 6 - 10 pounds (2,4 - 4,5 kg)
Miniature: mihoatra ny 12 (30 cm) hatramin'ny 15 santimetatra (38 cm) 10 - 20 pounds (4,5 - 9 kg)
Fenitra: mihoatra ny 15 santimetatra (38 cm) hatramin'ny 19 santimetatra (48 cm) 18 - 35 pounds (8kg - 16kg)
Mora amin'ny dysplasia amin'ny valahana sy ny atin'ny taolana miandalana. Tandremo tsara ny maso sy ny fantson-dranomaso. Ny sasany tsy mahazaka parasy. Ity karazan-jaza ity dia afaka mahazo lanja mora foana raha tsy manana fanatanjahan-tena ampy sy / na mihinana tafahoatra.
Ny Amerikana Eskimo dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Tena mihetsika be izy ao anaty trano ary ampy ny tokotany kely.
Ny eskimo amerikana dia mila raisina a dia an-tongotra lavitra isan'andro . Hahafinaritra ny tokotanin'izy ireo afaka mihazakazaka afaka mankafy azy io, na izany aza dia mbola mila entina mandeha an-tongotra izy mba hanomezana fahafaham-po ny fifindra-monina.
Ny palitao fotsy matevina sy lanezy dia mora karakaraina. Borosio amin'ny borosy borosy mafy indroa isan-kerinandro. Tokony kosehina isan'andro izy io rehefa raraka. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny American Eskimo dia iray amin'ireo fianakavian'i Spitz an'ny karazan'i Nordic. Izy io dia mifandray akaiky amin'ny fotsy Spitz Alemanina . Ny Spitze Alemanina dia nentina tany Amerika, izay nanovana ilay anarana hoe Dog Eskimo Amerikanina noho ny fihetseham-po manohitra ny Alemanina nandritra ny Ady Lehibe I. Ankehitriny dia fantatra ho karazany misaraka izy ireo, saingy mifandray akaiky amin'ny Spitz Alemanina. ny Samoyed , ny fotsy Keeshond ny fotsy Pomeranian ary ny Spitz Italiana fotsy koa dia voalaza fa misy ifandraisany amin'ny Alika Eskimo Amerikanina. Ny porofo dia manondro fa ny alika 'White Spitz' dia nentin'ny mpifindra monina alemanina voalohany tany Etazonia ary na teo aza ny anarany dia tsy misy ifandraisany amin'ny kolontsaina Eskimo. Tamin'ny 1913 no nisehoan'io anarana io rehefa Andriamatoa sy Ramatoa F.M. Hall no nisoratra anarana voalohany tamin'ny UKC (United Kennel Club). Ny anaran'ilay kennel dia 'American Eskimo', izay nanjary anaran'ny karazany. Tamin'ny 1969 dia natsangana ny National American Eskimo Dog Association ary nakatona ireo boky fianarana. Ny American Eskimo Dog Club of America dia niforona tamin'ny 1985 ho an'ny tanjona hahazoana ny fanekena AKC. Nankatoavin'ny AKC ny Alika Eskimo Amerikanina tamin'ny 1 Jolay 1995. Ny Amerikanina Eskimo dia novokarina ho alika miasa maro amin'ny toeram-piompiana. Alika manan-tsaina izy io izay mailaka, manana faniriana mafy hampifaly, karazana misaina ary manana toetra voajanahary. Ny sasany amin'ireo talentan'ny Eskimo amerikana dia ny fiandrasana, fiambenana, fiambenana, fitadiavana zava-mahadomelina, hakingana, fankatoavana mifaninana ary fanaovana hafetsena.
NAPR = Registra Amerikana Purebred Avaratra, Inc.
Buddy alika kely Eskimo Amerikanina amin'ny 5 volana
Hijery ohatra misimisy momba ny American Eskimo Dog
Sarin'ny alika eskimo amerikana 1
Sarin'ny alika eskimo amerikana 2
Sarin'ny alika eskimo amerikana 3
Sarin'ny alika eskimo amerikana 4
Sarin'ny alika eskimo amerikana sary 5
Karazana Spitz Alemana
fifangaroana maltese shih tzu mainty
fivarotana puppy mix yorkie crested sinoa
labozia rhodesian ridgeback mifangaro toetra
Alika kely mpanao ady totohondry 7 volana
Aostraliana mpiandry ondry Mix amin'ny poodle
Tehina 10 herinandro